Waxaan ahaa wariye aruuriya oo la socda Gudoomiyaha Diyaarada, waxaan ahay Fitr qasriga, halkaas oo aan kula kulmay abaabulkii balaarnaa ee ay soo diyaariyeen wax garadka magaalada Muqdisho, waxaan muujiyey xiisaha iyo qadarinta loo hayo wufuudda dowlada ee uu hogaaminayo Shariif Xasan Sh.Adam.
Wuxuu ahaa safar qurux badan oo xiise badan, waxaan safarkaas ka bartay in xalka Soomaalidu waxyar ka caqli badan yahay oo uusan u baahnayn hanjabaad iyo cagajugleyn, wadaadka Sayid Maxamed ayaa laga soo xigtay inuu yiri (Raggu wuxuu leeyahay walaalkey waan waayey). Maanta, hogaamiyayaasha Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin inay noqdaan kuwo caqli badan, karti badan, hufnaan badan, kalsooni badan, laakiin haddii xaaladda hadda socota ay sii socoto, haddii aadan sidaas yeelin oo aanan sidaas yeelin, waa dab la shiday.
Burburkii Maxamed Siyaad wuxuu ka billowday markii uu dulmiyay beelaha qaar oo uu ku faanay cududdiisa milateri, isagoo ku tiirsanaa ciidamada qalabka sida 21-kii Oktoobar, laakiin ma uusan ogeyn in ciidankan uu ka soo horjeeday beelaha Soomaaliyeed. oo haddii askarigu waxyeello ka soo gaadho beeshiisa wuxuu ku dagaallami doonaa qorigii uu ummadda siiyay.
Waa yaab. Dowladan Soomaaliyeed ee musaafuriska ah ee u dhaqmeysa si la yaab leh, hanjabaad ah meelaha qaarna ma shaqeyn doonto haddii wax walba la aqriyo. Laakiin wuu oggol yahay inuu tago ka dib markii uu kaga adkaaday militari ahaan. Soomaalida aqoonta u leh si dhakhso leh ayey isu cafin karaan, isula heshiin karaan, wax ku dhisan karaan, laakiin si dhakhso leh uma kala baxaan. Su’aashu waxay tahay maxaa ku dhacay maxamed siyaad markuu kursiga boqortooyada fadhiyay oo ay dowladaan cusub bilaabeen inay dibada ku noolaadaan bal aan aragno halka ay ku danbeyso. Maanta waa maalin wanaagsan, Ilaahay baa og.
Itoobiya ayaa kusoo duushay dhul Soomaaliyeed meelo badan, sida Gado, Bay iyo Bakool, waxayna tuurtay kuwii keenay oo waxay sameysay hogaan cusub kadib markii ay gacanta ku dhigtay deegaanka. Waxaan la yaabanahay, hogaamiyayaasha Soomaalida ee hadda ugu yeeraya Itoobiya inay timaaddo dalkeenna oo ay hub ka soo uruuriso Soomaalida, haddii ay taasi dhacdana oo hubka Soomaalida ku urursan yahay Itoobiya, yaa dammaanad ka qaadi kara in dambiilayaasha ay sii wadaan duullaanka dalka? iyaga oo ku wareejinaya. Sidii aan ka baranay Itoobiya, wax baannu ka wada bilownay oo ma dhammayn. Markuu odaygu xasuusto qodobkan, waxaa la sheegaa in nimanku ay Cumar Xaji Masalle kalsoonidiisa leeyihiin Iyaga ayaa ah kuwa kaga tagay Shaati-guduud hal wadar oo ah ARR. Hogaamiye miyey kaa xishoon doonaan weligoodna miyay kaa kaxayn doonaan? Kaliya Itoobiya ayaa jawaab leh, laakiin Odug ayaa nasiib badan. Caqliga saliimka ahi wuxuu ina farayaa in kolba inta uu Madaxweynuhu is tijaabiyo, inbadan oo ka mid ah soomaalidu inay is tijaabiyaan, xitaa soomaalida kuu balan qaada iyo itoobiya ayaa kuu balan qaadaya, waa kuma odayga ugu halista badan? Iyo dalka oo aad khatar u ah?
Sh. Cali Wajiiz ayaa yiri isagoo khudbad ka jeedinaya masaajid ku yaal xaafadda Soomaalida ee Nairobi. Hadday Itoobiya u aamminsan tahay Cabdullaahi Yuusuf inuu yahay askari, nasiib buu yeelan doonaa nasiibna nagama yeelan doono, maxaa yeelay markuu arko ciidan Soomaaliyeed oo ku soo dhowaanaya oo uu dhowr safar u baxayo dibadda, waanu sugi doonnaa.
Taariikhda Soomaaliya waxaa ka jiray jabhado lala galo Itoobiya, oo sida hub iyo rasaas, laakiin ma jirin Hogaamiye Soomaaliyeed oo hub iyo taakuleyn siin kara Itoobiya. Malaha C / laahi Yuusuf wuxuu bilaabay kacdoonkii ugu horeeyey ee ay taageerto Itoobiya, hadana wuxuu damacsan yahay inuu noqdo Hogaamiyaha Soomaaliya oo ay taageerto Itoobiya.
Dariiqa kaliya ee maanta u furan hogaamiyayaasha Soomaalida waa inay xiriirka u jaraan Itoobiya, haddii aysan jarin karin waa inay wiiqaan, haddii aysan daciifin karinna waa inay xadidaan siyaasadda, haddii kale ma dhici karaan inay fashilmaan dhaqso.
Dadka Soomaaliyeed iyo danaha Itoobiya waa kuwo aan kala maarmi karin. lama daba geli karo, laakiin khiyaano ayay ku yareyn karaan cadaawaddooda. Waxa laga yaabaa inaanay fiicnayn, laakiin xoogaa way qalloocan tahay. Laakiin waxay u baahan tahay hoggaamin caqli badan, falsafad badan, dad badan oo lagu kalsoonaado. Taasi hadda uma muuqato.
Halgan kastaa wuu qiimeeyaa dhamaadka. Haddii uu barwaaqoobo oo uu barwaaqoobo, wixii khaldamay intii halganka lagu jiray waa la cafiyi doonaa ama waa la illaabi doonaa. Haddiise halganku ku dhammaado burbur iyo taariikh xumo jiilalka soo socda, inkaarta taariikhda xun ayaa dhammaan doonta.
Waxaan ula jeedaa, haddii 30 sano xiriirka Itoobiya uu dhammaado iyada oo Itoobiya loo gacan gelinayo Soomaaliya, waa fadeexad aan dhammaan doonin. Laakiin haddii dadka Soomaaliyeed soo noqdaan oo hoggaamiye daacad u ah dalka oo danta guud ka shaqeeya uu dhammaado, waa wax la ilaawi karo waagii hore, ama ugu yaraan la oran karo, ninkaan wanaag buu leeyahay oo xun, laakiin sifiican ayuu kudhamaaday.
Waxaa loo haystay in ninkii ay Itoobiya isla soo shaqeeyeen uu sifiican u yaqaanay, laakiin waxaa soo baxday in ninka ka fog Itoobiya uu arki karo danaha ay ka leeyihiin Soomaaliya.
Fahad Yaasiin Xaaji DaahirFeb 14, 2005 Xigasho: SomaliTalk